Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado wuxuu soo saaray Qoraal ku saabsan Falcelinta Xadgudubka Muhaajiriinta Haiti - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > In News > Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado wuxuu soo saaraa Bayaan ku saabsan Falcelinta Xadgudubka Muhaajiriinta Haiti
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado wuxuu soo saaraa Bayaan ku saabsan Falcelinta Xadgudubka Muhaajiriinta Haiti
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta Colorado (CIRC) ayaa soo saaray bayaankan soo socda:
“Sawirrada naxdinta leh ee toddobaadkan ee wakiillada ilaalada xudduudduhu waxay karbaashaan oo ku dhuftaan magangalyo -doonka Haiti ee ku sugan soohdinta koonfureed waa wax laga naxo laakiin aan la yaab lahayn. Tani ma aha dhaqan aan caadi ahayn oo ay sameeyaan ilaalada xuduudaha Mareykanka (CBP). Farqiga u dhexeeya waqtigan ayaa ah inuu joogay sawir -qaade si uu dhacdadan ugu bandhigo adduunka. Imisa dhacdo oo kale oo tan oo kale ah ayaa maalin walba aan la soo sheegin? Waaxda Amniga Gudaha ayaa bilawday baaritaan ku saabsan dhacdadan laakiin tani kuma filna. Dhammaan wakaaladda ilaalada xuduudaha, oo saddex jibaartay labaatankii sano ee la soo dhaafay, waa in aan la baarin oo keliya ee lala xisaabtamo dhammaan falalkooda.
Xitaa inta maamulku bilaabayo baaritaankiisa ku aaddan dhacdadan gaarka ah, wuxuu sii wadaa inuu si naxariis darro ah uga masaafuriyo Haitians-ka Mareykanka- isagoo u adeegsanaya Cinwaanka 42 inuu yahay cudurdaar- inuu dib ugu laabto Haiti, oo ah waddan hadda ku jira qalalaasaha siyaasadeed iyo deegaan ee daran, waxayna leedahay ayaa sidoo kale si naxariis darro ah wacad ugu maray inay jebin doonaan xerada muhaajiriinta Haitian ee Del Rio, Texas.
Muhaajiriinta Haiti waa qaxooti doonaya nabad iyo nolol ka wanaagsan Maraykanka waana in loola dhaqmaa sidaas. Waxaan xusuusineynaa kuwa awoodda leh in aysan sharci -darro ahayn in magangelyo laga raadsado Mareykanka. Maamulka Biden iyo DHS waa inay joojiyaan dhammaan masaafurinta. Waa inay sidoo kale joojiyaan Title 42, oo ah sharci -darro, siyaasad cunsuriyad ah oo dadka madowga, Brown iyo Indiginous soo -galootiga ah ka xayuubinaya xuquuqdooda magangalyo isla markaana ku xad -gudbaya xuquuqda aadanaha ee kuwa ku hoos jira. Dhammaan dadka magangalyo doonka ah ee Haiti ee ku sugan xadka waa in la siiyaa sii -dayn sharafeed bani'aadamnimo si loogu oggolaado in loo wareejiyo xaalado nabdoon oo laga fogeeyo si xun ula -dhaqanka CBP, waana in la siiyaa hoy ammaan ah, biyo, cunto iyo daryeel caafimaad inta ay sugayaan fursad ay ku codsadaan ilaalin. Maamulka Biden wuxuu ku adkeystay jirdilyada Cinwaanka 42 annaga ayayna ku xiran tahay, dadku inay ogaadaan inaanan u dulqaadan doonin. ”
Guddiga CIRC wuxuu la taagan yahay Shaqaalaheena
Qoraalka CIRC ee Xukunka Baarlamaanka Labaad: Wac VP Harris si uu u iloobo Talo soo jeedinta Baarlamaanka
Warsaxaafadeed, Maxaa Ka Cusub CIRC